zingamashumi amane namhlanu. Isonto lingxenye kaPentecostal - Protestant kabukrestu, ukuthi laqala iminyaka imikhulu kade. Isonto alivumi ngemkhankanyo wa - Trinity
kweSepum noTingi ngeminyaka engama - 530. UTingis waqiniswa futhi kwakhiwa isonto enyakatho umngcele wamanzi enqamula eStrait nemingcele yomhlaba enezicaba
Ngo - 857 ithempeli lakhiwa kuVlamertinge. Ngo - 970 Ypres kwabhujiswa futhi isonto likaVlamertinge lishisa. Idokhumenti endala, eyaziwayo kuze kube yimanje
lokuqala lavulwa ngonyaka we - 1856 nesikole sokuqala savulwa ngonyaka we - 1861. Isonto laseSheshi lakhiwa ngonyaka we - 1876 nebhange lokuqala lavulwa ngonyaka we - 1876
ngendlela engamahloniphi kunabanye abantu ngenxa yobuzwe, ubulili, iminyaka, isonto amasiko ukukhubazeka kanye nobulili ababo. Isithunzi somuntu: isithunzi
Ngemuva kokuwa kweRome, iSonto lamaKhatholika laba ukuphela komgcini wezifundo zokufunda nokubhala eNtshonalanga Yurophu. Isonto lisungule izikole zesonto
iVolkswagen Beetle yavutha abafundi. U - Ngutshane akaboshiwe kwaze kwaphela isonto kanti ube esekhotho lapho kuqalwa ukuvukela kweSoweto Abafundi babebuthene
zakhe ezikhonza umphakathi ezitholakala iSwaziland National Bank, St Mary iSonto LamaKatolika Lobamba, COSATU House, eGoli, kanye Dieploof, eSoweto. Kuze
uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - insindiso - umoya ongcwele - isonto - izulu - ingelosi - uBudha - Inkolo kaBudha Ukudla: utamatisi - izambane
Mahajanga Idolobhakazi Isonto elise Mahajanga Isiphandla Mahajanga Indawo ye - Mahajanga eMadagasika Izixhumanisi: 15 43 S 46 19 E 15.717 S 46.317 E